Jijjiiramoota dhuunfaa fudhu ykn dhiisi.
Galfanni ulaagaa gingiilchaatii walsima.
Galfanni xixiqqaan tokko ykn isaa ol ulaagaa gingiilchaan walsima.
Galfanni xixiqqaan ulaagaa gingiilchaatii wal hin simu.
Galfanni xixiqqaan ulaagaa gingiilchaatii walsima.
Jijjiirama erga fudhatteeykn dhiifttee,galfatoota akkaataa "Fudhatame" ykn "Dhiifame" haalojii irradeebiin.
Jijjiiram filatamee fudhata galmee keessaa ammo jijjiirama irraa shoolaa haqa.
Jijjiiram filatamee dhiisi; galmee keessaa ammo jijjiirama irraa shoolaa haqa.
Ajajawwan dabalataa tarree baafata halqaraa keessa jiru:
Tarree akkaataa matadureewwan tarsaatti foo'a.
Title is: Tarree